कक्षा र घटनाहरू - जेफरसन केन्द्र - मानसिक स्वास्थ्य र पदार्थ प्रयोग सेवाहरू
मद्दत गर्दै किशोर फलाउन ... सँगै • मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार • आत्महत्या रोकथाम प्रशिक्षण • QMAP • वेबिनार श्रृंखला • कल्याण वर्ग • मानसिक स्वास्थ्यको लागि चालमा • वार्षिक पर्व • बच्चाहरूलाई फस्टाउन मद्दत गर्दै
मद्दत गर्दै किशोर फलाउन ... सँगै
किशोर फलाउन मद्दत गर्दै ... सँगै किशोर र तिनीहरूको विश्वस्त वयस्कहरूको लागि एकसाथ एक नयाँ आभासी घटना हो र एकसाथ सिक्न। Ff० बर्षे जेफर्सन सेन्टरको हेल्पिंग किड्स फ्रिभ सम्मेलन मार्फत अभिभावकलाई सहयोग पुर्‍याउन, समुदाय साझेदारहरू यस भाई / बहिनीको कार्यक्रमको योजना बनाउन आएका छन्। यहाँ थप जान्नुहोस्.
कृपया नोट गर्नुहोस्, सबै मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कक्षा अर्को सूचना नभएसम्म भर्चुअल सेटिंगमा आयोजित गरिनेछ।
मानसिक स्वास्थ्य प्रथमोपचारले जनतालाई मानसिक रोगहरू र पदार्थ प्रयोग विकारहरूको पहिचान गर्न, बुझ्न, र प्रतिक्रिया दिन सिकाउँछ। मानसिक स्वास्थ्यको लागि जेफरसन सेन्टरले हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई यी अन्तर्क्रियात्मक--घण्टा पाठ्यक्रम नि: शुल्क प्रस्ताव गर्न पाउँदा गर्व छ। वर्ग तालिका हेर्नुहोस् र आज साइन अप गर्नुहोस्!
क्यूपीआर-आत्महत्या रोकथाम प्रशिक्षण
आत्महत्या रोक्न कार्यक्रमको लक्ष्य मध्ये एक समुदायमा "द्वारपाल" लाई आत्महत्या रोकथाम कार्यशालामा भाग लिनको लागि भर्ती गर्नु हो। वर्ग तालिका हेर्नुहोस् र अब दर्ता गर्नुहोस्!
योग्य औषधि प्रशासन कर्मचारी (QMAP)
जेफरसन सेन्टरले एक क्वालिफाइड मेडिकेसन एडमिनिस्ट्रेशन कार्मिक (QMAP) प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न एक कक्षा प्रदान गर्दछ। कक्षा एक जेफरसन केन्द्र प्रशिक्षक द्वारा सिकाईएको छ र लगभग months महिनामा लगभग प्रस्ताव गरिन्छ। कक्षा कक्षाकोठा शिक्षाको एक दिन मा विभाजित छ र भोलिपल्ट लिखित र अभ्यास अभ्यास हो। कक्षाको दिन बिहान3देखि साँझ 8 सम्म हुन्छ। कक्षाकोठाको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू निम्न दिनको लागि आफ्नो रुचि परीक्षण समयको लागि साइन अप गर्दछन्। परीक्षा दिन सामान्यतया विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक विद्यार्थीको आधारमा पूरा गर्न २ घण्टा लाग्छ। वर्ग तालिका हेर्नुहोस् र अब दर्ता गर्नुहोस्!
तपाईंको समुदाय मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा, हामी उपकरणहरू र संसाधनहरूको पहुँच गर्न सजिलो बनाउँदछौं तपाईंको कल्याणलाई कुनै पनि समय, कहीं पनि समर्थन गर्न। हाम्रो माग गरिएको वेबिनरहरूको पुस्तकालय जाँच गर्नुहोस् र द्वारा आगामी वेबिनारहरूको लागि दर्ता गर्नुहोस् यहाँ क्लिक.
स्वास्थ्य र पुन: प्राप्तिलाई सहयोग पुर्‍याउन ग्राहक र समुदायलाई विभिन्न प्रकारका वर्गहरू दिइन्छ। हालको सूची हेर्नुहोस् र अब दर्ता गर्नुहोस्!
उठ्नुहोस् र यो वसन्त सार्न हाम्रो पहिलो-वर्चुअल गतिविधि चुनौतीमा शामिल हुँदै! अझै सिक।
जेफरसन सेन्टरले सेप्टेम्बरमा हाम्रो पहिलो-आभासी पर्व आयोजना गर्‍यो र त्यो घटना धेरै हिट भयो! अझै सिक.
बच्चाहरूलाई फलिफ्याउन सहयोगी एक निःशुल्क वार्षिक अभिभावकीय सम्मेलन हो जुन व्यावहारिक जानकारीको साथ बच्चाहरू र युवाहरूलाई सकरात्मक तरीकाले बढ्न मद्दत गर्दछ। यो किशोर किशोरीहरु र अन्य वयस्कहरु को लागी आमा बुबा को लागी हो! थप जानकारीको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।